नेपाल प्रहरीले एक्कासी किन लियो यस्तो निर्णय ? एक साथ इन्चार्ज सहित १० प्रहरी ‘का’र’वा’ हीमा – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपाल प्रहरीले एक्कासी किन लियो यस्तो निर्णय ? एक साथ इन्चार्ज सहित १० प्रहरी ‘का’र’वा’ हीमा
नेपाल प्रहरीले आफ्नो माताहत एकै चौकीमा कार्यरत इन्चार्ज सहित सबै प्रहरीलाई ‘का’र’वा ही गर्ने भएको छ । सुदुर पश्चिम प्रदेश अन्तरगत धनगढीको सीमा प्रहरी चौकी बहुलियाका सई सहितका १० प्रहरीमाथि ‘का’र’बा’ ही गरिने भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय श्रोतका अनुसार उनीहरुको आचरणमा प्रश्न उठेको छ । निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक प्रतिक विष्टले काम कारवाही सन्तोशजनक नदेखिएपछि चौकीमा कार्यरत सबै प्रहरीलाई जिल्ला तानेर छानविन भईरहेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रहरी चौकी बहुलियाका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरिक्षक गोपाल कार्की सहितका १० जना प्रहरीमाथि पेशागत आचरण अनुसार काम नगरेको आरोपमा लागेको छ । उनीहरुलाई यही आरोप अन्तरगत कारवाही हुने भएको हो ।जिल्ला तानिनेमा कार्यालय सहयोगीदेखि इन्चार्ज सम्मका प्रहरी कर्मचारी रहेका छन् । श्रोतका अनुसार चौकीमा थुनुवामाथि ‘कु’ट’पि’ ट गरेको आरोपमा उनीहरुलाई जिल्ला तानिएको हो ।
यसअघि पनि सोही प्रहरी चौकीमा गत साउन २८ मा हिरासतमा लिईएको फूलबारीका अमरबहादुर चन्दको ज्यान गएको बिषयमा छानविनका लागि तत्कालीन इन्चार्ज जंगबहादुर सिह सहितका तीन जना प्रहरीलाई जिल्ला तानिएको थियो । गत २७ साउनमा मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गरेको आरोपमा प्रहरी चौकी बहुलियाले पक्राउ गरेका चन्द शौचालयमा ज्यान गएको अवस्थामा भेटिएका थिए । त्कालीन सयममा प्रहरीले चन्दले आफ्नो ज्यान आफै लिएको दावी गरेपनि आफन्तले भने प्रहरीले नै ज्यान लिएको आरोप लगाएका थिए।
घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई ‘का’र’वा’ही को दायरामा ल्याउने सहमतीपछि चन्दका आफन्तले शव बुझेका थिए । प्रहरीले छानविनका लागि एसपीको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक मुकेशकुमार सिहले जिल्ला झिकाईएका प्रहरीमाथि छानविन भईरहेकाले दोषी देखिए ‘का’र’वा’ ही गरिने बताए ।